आजको राशिफल : २०७७ साल पुस ३ गते शुक्रबार – Samacharpati Samacharpati आजको राशिफल : २०७७ साल पुस ३ गते शुक्रबार – Samacharpati
फुटपाथ, पार्किङ तथा बजार व्यवस्थापनबारे पोउवा संघको सुझाव महानगरलाई
लुम्लेमा सुनगाभा युवा क्लवको आयोजनामा प्रविण गुरुङ स्मृती मेला हुने
यथास्थितिमा ओलीसँग एकता सम्भव छैन : प्रचण्ड–माधव समूह
कास्की काँग्रेसद्वारा सर्वाेच्चको निर्णय स्वागत, आन्दोलनमा साथ दिनेप्रति धन्यवाद
छात्रालाई हाेटेलमा लगेर परीक्षा दिन लगाउने शिक्षक कारागार चलान
२०७७ पुष ३ शुक्रवार, चतुर्थी – अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी दिवस – 18 Dec 2020
मेष – चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ – आजको मिहिनेतले भविष्यमा नाम र प्रतिष्ठा दिलाउन सक्छ। आफ्नो क्षेत्रमा प्रभुत्व जमाउन सकिनेछ। साथीभाइको सहयोगले हिम्मत दिलाउनेछ। राम्रो कर्मफल प्राप्त हुनाले मन प्रसन्न रहनेछ। अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ। तारिफयोग्य कामले सामाजिक दायित्व दिलाउनेछ। विभिन्न भौतिक साधनहरू पनि जुटाउन सकिनेछ।
वृष – इ, उ, ए, ओ, बा, बि, बु, बे, बो – गरिएका कामको राम्रो मूल्याङ्कन हुनेछ । आम्दानी बढ्नाले परिवारजनका आवश्यकता पूरा हुनेछन् । समुदायको हक हितको संरक्षण गर्दै धेरैको भलाइ हुने काम गर्न सकिने छ । लगनशीलताले कीर्तिमानी दिलाउन सक्छ । प्रतिष्ठित काम गर्ने मौका छ । अरूलाई प्रभावित पारेर काम बनाउने समय छ । दाम, इनाम र प्रतिष्ठा कमाउने बेला छ ।
मिथुन – का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह – आफ्नो क्षमता प्रयोग गरी अरुको ध्यान आफूतिर आकर्षित गर्न सकिनेछ भने मान सम्मानमा बृद्धि भएर जानेछ । मानव निर्मित भौतिक सम्पतिको प्रयोग गर्न पाइने तथा विलासी जीवन व्यातित गरी रमाउने समय रहेकोछ । जीवन साथीसँग रमाईलो यात्राको तय गर्न सकिनेछ भने एकल तथा साझेदारी व्यावसायबाट प्रशस्त आम्दानी गर्न सकिनेछ ।
कर्कट – हि, हु, हे, हो, डा, डि, डु, डे, डो – घुमफिर तथा मनोरञ्जनको समय छ। प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो रहनेछ। भौतिक साधनले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सक्छ। अतिथिका रूपमा सत्कार पाइनेछ। आम्दानी बढाउने काम सुरु गर्न सकिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। व्यवसायको सन्दर्भमा रमाइलो यात्रा हुन सक्छ। काममा साथीभाइको सहयोगले उत्साह मिल्नेछ।
सिंह – मा, मि, मु, मे, मो, टा, टि, टु, टे – प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिनुका साथै दाम्पत्य सुखमा रमाउने समय छ । विभिन्न सहयोग र उपहार पाइने छ । प्रियजनसँगको भेटघाटले दिन रमाइलो बनाउनेछ । नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । व्यापार–व्यवसायमा विशेष लाभ लिने समय छ । व्यावसायिक यात्राको सम्भावना छ । दाम्पत्य जीवनमा रमाइलो रहने छ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ ।
कन्या – टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो – राजनीति तथा सामाजिक कामहरुमा समय खर्चिनेहरुले समयमा सर्बसाधारणको काम गर्न सम्दा पद प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेयोग रहेकोछ । साथिहरुको सहयोगले उपलव्धी मुलक काम गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ । पढाइ लेखाइमा सुधार गर्दै लान सकिनेछ भने खोज तथा अनुशन्धानमा नयाँ कुरा पत्ता लगाउन सकिनेछ । कृषि तथा पशुपालन व्यावसायमा लगानी गरी मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ ।
तुला – र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते – प्रक्रिया नमिल्नाले काम दोहोर्याउनुपर्ने स्थिति आउन सक्छ। हिस्सेदारसँग असमझदारी बढ्नाले पहिलेको सम्झौता भंग होला। बेसुरमा दिइएको वचनले समस्या निम्त्याउला। योजना तत्काल सार्वजनिक नगर्नुहोला। कृषिबाट सामान्य लाभ हुनेछ। अनावश्यक साइनो गाँस्नेहरूसँग सावधान रहनुहोला। आमाको माध्यमबाट केही काम बनाउन सकिनेछ।
वृश्चिक – तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु – आज काम बिग्रने डरले सताइरहने दिन हो । सम्झौताले खिन्नता बढाउनेछ भने बुद्धिको सही उपयोग हुन सक्दैन । लक्ष्य पहिल्याउने क्षमतामा कमी आउने छ । परिवारजन तथा बन्धु–बान्धवबीच सम्बन्ध चिसिन सक्छ । तर सतर्क भई व्यवहार गर्नसके बिग्रिएको सम्बन्ध र विगतका कमजोरीलाई सुधार गर्ने मौका छ ।
धनु – ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे – राजनीति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन पाइने हुदा नाम कमाउन तथा पद प्राप्तीको योग रहेकोछ । बिभिन्न विलाशी वस्तुको प्रयोग गरी मनग्गे आम्दानी हुनेछ । आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुने चालिएका कदमहरुबाट भनेजस्तो नतिजा आउने हुनाले मन प्रफुल्लित हुनेछ । माया प्रेममा एक अर्कालाई विश्वास गर्ने वाताबरण बन्नेछ । पढाइ लेखाइमा मनजाने हुनाले नतिजा आफैतिर ल्याउन सकिनेछ ।
मकर – भो, ज, जि, खि, खु, खे, खो, गा, गि – विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि काममा अरूको मुख ताक्नाले पछि परिनेछ। सरकारी कामकाजमा अलमल हुन सक्छ। तापनि पहिलेको सफलताले हौसला जगाउनेछ। बिछोडिएका आफन्तजन भेटिनेछन्। खानपानको सोखले स्वास्थ्य प्रतिकूल बन्न सक्छ। प्रयत्न गर्दा समस्या समाधान हुनेछन्। कामका लागि धाउनेहरूबाट भने अलि सजग रहनुपर्ला।
कुम्भ – गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द – इच्छाशक्ति बढ्नेछ भने रचनात्मक कार्य शुभारम्भ गर्न सकिने छ । परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने छ । मनग्ये धन आर्जन होला । विछोडिएका आफन्तसँग भेटघाट हुनेछ । नयाँ कामको प्रस्ताव आउन सक्छ । बोलीवचनमा सुमधुरताको आगमन हुनेछ । मनमा उत्साह र उमङ्गको कमी हुनेछैन । लेनदेन र व्यापारव्यवसायमा अभिबृद्धि हुनेछ । मानसम्मान र प्रतिष्ठा बढ्ने छ ।
मीन – दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि – गीत संगित क्षेत्रमा रुची बढ्ने हुँदा केही समय रमाईलो तिर पनि समय खर्च हुनेछ । समयको गतीसँगै अगाडि बढ्न सकिने हुनाले आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुन सकिनेछ । आज गरीएको लगानी फस्टाएर जाने हुनाले व्यापारबाट मनग्गे लाभ लिन सकिनेछ । नयाँ काम खोज्दै हुनुहुन्छ भने समयले रोजगार दिलाउने तथा कामका बढुवा हुने योग रहेकोछ । पढाइ लेखाइमा तपार्ईँको नाम अग्र स्थानमा आउनेछ । माता पिताको सहयोगले राम्रा कामगरी समाजमा नाम तथा दाम दुवै कमाउन सकिनेछ ।
नेपालको राजनीति दलमा आर्थिक अनुशासन भएन् – पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव
दुवै हात खुट्टा न चल्ने बिक्रमसंग मनुले गरिन बिहे, हेर्नुहोस भिडियो
सर्वोच्च अदालतले धर्म निर्वाह गरेको छ- पूर्वराष्ट्रपति डा. यादव
जंगली हात्तीको आक्रमणबाट कञ्चनपुरकी महिलाको मृत्यु
रवीन्द्र मिश्रको ‘राजनीतिसँगै राजकाज’ आउँदै
२५ करोड दिएका बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारले फेरी दिए ३ करोड
काेराेना नियन्त्रण गर्नका लागि सरकारले चाल्यो यस्ताे कदम
तनहुँमा सवारी दुर्घटना ८ जना घाईते